UComitis ulungele ukuqondisa ukukhuluma okwasala noBenni
IZINSUKU ezimnandi phakathi kukaJohn Comitis nobengumqeqeshi weqembu lakhe, uBenni McCarthy abangasazani yize besuka kude nempilo yebhola ndawonye Isithombe: BACKPAGEPIX
MINENHLE MKHIZE | June 6, 2020
USIHLALO weCape Town City, uJohn Comitis, usekulungele ukuhlangana nobengumqeqeshi wakhe uBenni McCarthy baqondise ukukhuluma okwasala mhla behlukana ngezindlela.
Laba ababili kuvela ukuthi sekuphele izinyanga eziyisithupha bengakhulumisani kusukela uMcCarthy eshiye iCitizens yize bazana kusuka ngo-1997 umqeqeshi esafika ebholeni njengomdlali osemncane.
UMcCarthy nguye ovukuze eyokungcwaba amagqubu phakathi kwakhe noComitis ngesikhathi ekhuluma nezintatheli zaseMzansi kuleli sonto.
NoComitis uphendule ngokuthi akanankinga nale nkakha yomgadli weBafana.
"Anginankinga noBenni McCarthy kwazise usebe ngumngani wami esisondelene naye isikathi eside. Ibhola yibhola. UBenni ngimazi kusuka ebuncaneni. Uma engifonela, ngingajabula kabi ukuthola ucingo lwakhe,"kusho uComitis, owazana noMcCarthy behlangana ndawonye ngezinsuku zeSeven Stars FC neCape Town Spurs.
"Ngimhlonipha kabi uBenni, uyinkakha yaseNingizimu Afrika,"
UMcCarthy useScotland lapho ezingela khona umsebenzi.
"UBenni sasinaye kwiSeven Stars kodwa ngeshwa ngaleso sikhathi ngisazwana noRob Moore, iSeven Stars ibingakabikhona kwiPremier League. Senza isivumelwano sokubelekana ngaye ukuze eze kwiCape Town Spurs
"Ubesengumfanyana futhi simdlalisa ophondweni lwesokudla. Idlanzana labaqeqeshi lathi asimdlalise kunombolo-9. Samphosa khona, wagila izimanga. Washaya inethi sibhekene neFree State Stars ngaphambi kokubasela amabili sibhekene neKaizer Chiefs kwaba wukugqamuka kwamalangabi njalo,"kubuyekeza uComitis.
Kusukela lapho uMcCarthy uzungeze umhlaba eshaya amagoli nokuholela ekutheni anqobe i-2004 Uefa Champions League, okusenguye eydwa umdlali waseMzansi ukwenza lokhhu.
NakwiBafana uphethe irekhodi lamagoli amaningi ukwedlula bonke emlandweni.
"Siyiklamile indima ekumfukuleni abe lapha ekhona kodwa futhi ubevele ezofinyelela nangaphandle kwethu. Ngeke simphuce lokho,"kusho uComitis kucaca ukuthi namanje usambeka entendeni yesandla yize sebehlukene.
"Noma ngabe isimo sibucayi kanjani, uBenni uhlezi ezomamatheka aqhamuke nesisombululo. Akamangazwa yilutho. Uhlezi ecabanga kahle. Uyazethemba, yingakho efike wathola imiphumela emihle nala (kwiCitizens).
"Akukhathaleki ukuthi ungumqeqeshi onegama elingakanani, emhlabeni wonke siyafika leso sikhathi somhlukanandlela. Lokho akushintshi ukuthi ufike wenzani."
"Simfisela okuhle kodwa. Ulindwe yizinto ezinkulu futhi uzozizuza,"kusho uComitis.